တကူ သားလေး ရဲ့ နည်းပညာ စုစည်းမှု: surface mount chip tramsformar(Ac to Ac) အကြောင်းလေးပါ...
surface mount chip tramsformar(Ac to Ac) အကြောင်းလေးပါ...
အဲဒီကောင်လေး မကောင်းရင် လွတ်ရင်Power ပျောက်တာတို့Display မှိန်နေတာတို့ မပေါ်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ် အဲဒီ Coil လေးက အကောင်းစား ferrite core ကို ပတ်ထားတာပါ။ first
coil(primary coil) ရဲ့ magnetic field ကို second coil(secondary coil) က ညို့ယူလိုက်တာပါ။ သူ့အလုပ်လုပ်ပုံလေးကတော့ IC က AC Fequency ထွက်လာတာကို Surfacemoutcoil ကမြင့်မားတဲ့ AC Fequency ကို အနည်းဆုံး Fequency ဆုံးရှုံးမှု့မရှိအောင် Volt မြှင့်ပြီး Diode ဆီသွားပြီး DC ပြန်ထုတ်ပေးတာပါ ။အဲဒီ Coil မကောင်းရင်Voltမထွက်တာဗို့နည်းသွားတာ တို့စသဖြင့်ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။ကောင်းမကောင်းတိုင်းဖို့ရာတော့ မလွယ်ပါဘူး Meter နဲ့တိုင်းမယ်ဆိုရင် အထဲက Coil လေးပြတ်နေရင်တော့ ဘာမှပြမှာမဟုတ်ပါဘူး ခန့်မှန်းချေ ကောင်းမယ်ဆိုရင် Ohm နည်းနည်းလေးဘဲ(1ohm ခန့်) ။အဲဒီ Coil ကရှော့ ဖြစ်နေရင် တော့ Meter က (turn short)ပြနေမှာပါ အထဲက Coil လေးပြတ်နေရင်တော့ ဘာမှပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး လဲကြည့် ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ …
1.AC supply is given toacoil, the intensity of magnetic field keeps on varying between minimum to maximum because in AC positive and negative half cycle are produced alternately. If another coil is placed within the magnetic field of the first coil, voltage is generated in the second coil also)
2.The Unit of Transformer is Volt Ampere.
3.The main function ofaTransformer is increase or decrease AC voltage.
Posted by အောင်မျိုး at 3:15 AM